Dib -u -eegista Buugga aan -khayaaliga ahayn
Prometheus, oo uu qoray Luis García Montero
Ciise Masiix waxa uu ka adkaaday jirrabaadii Ibliisku ee uu ku badbaadinayay bini'aadamka. Prometheus wuxuu sameeyay si la mid ah, isagoo sidoo kale u maleynaya ciqaabta iman doonta hadhow. Diidmadu waxay samaysay khuraafaad iyo halyey. Rajada ah in aan si dhab ah mar uun u heli karno qaabkaas geesinimada ah ee marar badan laga bartay iyo in...
Helgoland waxaa qoray Carlo Rovelli
Caqabadda cilmigu maaha kaliya in la ogaado ama la soo jeediyo xalalka wax kasta. Arrintu waxay sidoo kale ku saabsan tahay in aqoonta la siiyo adduunka. Sheegiddu waa sida lama huraanka ah maadaama ay adagtahay marka doodaha lagu soo bandhigo qoto dheer ee cilmi kasta. Laakin sida uu ninkii xigmadda lahaa yiri, annagu dad baynu nahay ee wax…
Dhimashada uu sapiens u sheegay Neanderthal
Wax walba ma noqon doonaan rooti indho la'aanta nolosha. Maxaa yeelay, marka la eego maxsuulka wax walba xukumaya, gogoldhiggaas tilmaamaya jiritaanka shay kasta oo ku salaysan qiimahooda ka soo horjeeda, nolosha iyo dhimashadu waxay ka samaysan yihiin qaab-dhismeedka lagama maarmaanka ah ee u dhexeeya darafyadooda. Oo sabab...
Nooca Runaway ee Anthony Brandt
Waxaynu dhexda u sii galaynaa sirta wayn ee koboca aadamiga, mucjisada taas oo ahayd xaqiiqada kala duwan. In badan kama hadalno sirta laakiin waxaynu ka hadalnaa hal-abuurnimada. Marka la eego sirta, proto-man wuxuu fahmi karaa waxa dabku yahay cawaaqibka u soo dhawaanshaha. Waad ku mahadsan tahay hal-abuurka...
Laga soo bilaabo Gudaha, waxaa qoray Martin Amis
Suugaanta oo ah hab-nololeed mararka qaarkood waxay la qaraxdaa shaqo ku taal marinka sheekada, daba-dheeraada iyo taariikh nololeedka. Taasina waxay ku dhammaataa inay noqoto jimicsiga ugu daacadsan ee qoraaga kaas oo isku dara dhiirigelinta, kicinta, xusuusta, waaya-aragnimada ... Kaliya waxa Martín Amis nagu soo bandhigo ...
Marka la eego masduulaagii soo jeeday, waxaa qoray Mavi Doñate
Inaad wariye noqoto waxay ansixisay dhammaan qodobbada lagu tixgeliyo naftaada qof safray. Sababtoo ah si aad u sheegto waxa ka dhacaya meel kasta oo adduunka ah waa inaad haysataa aqoonta aasaasiga ah si aad u gudbiso waxa dhacaya si kalsooni leh. Natiijadu waxay noqon kartaa, sida kiiskan, ...
Sacramento, waxaa qoray Antonio Soler
In tiirarka ay soo jiitaan waa tilmaanta fiisigiska. Laga soo bilaabo halkaas hooyada dhammaan khilaafyadayada. Jagooyinka xad dhaafka ah ee bini'aadamka waxay ku dhamaanayaan inay ku biiraan dareenka aan la joojin karin ee magnetism ama inertia. Wanaagga iyo xumaantu waxay soo bandhigaan buugaagtooda mabaadi'da iyo jirrabaadda iyo wax kasta ...
Liiska Waxyaalaha Lumay, Judith Schalansky
Ma jiraan janno ka badan kuwa lumay, sida John Milton uu odhan lahaa. Ama wax ka qiimo badan kuwa aanad haysan, mana aad ilaalin kartid. Cajiibka dhabta ah ee aduunku markaa waa ka badan yahay kuwa aynu ku dhamaanayno ee aynu ku luminayno ama baabi’inaynayba kuwa maanta sidaas loo alifayo, iyaga oo intaa ku daray...
Farshaxanka Dagaalka u dhexeeya Shirkadaha, waxaa qoray David Brown
Sun Tzu wuxuu qoray buugiisa "Farshaxanka dagaalka" dib u soo noqoshada qarnigii XNUMXaad ee BC. Dagaalo badan oo danbe, iyo laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad ilaa maanta, iskahorimaadyada cusub ee lagu dabaqi karo fanka wanaagsan iyo kuwa xun ayaa lagu muransan yahay oo u dhexeeya shirkado caalami ah ama shirkado dawladeed. Waxaan markaa u gudubnaa fanka ...
Laambadda Weyn, waxaa qoray Maria Konnikova
Qoraa ka hor inta aysan ahayn cayaaryahan khamaarka, María Konnikova waxay u timid ciyaarta cayaaraha kaararka iyada oo ay sabab u tahay sheeko kasta oo dooneysa inay u soo dhowaato dhacdo sheeko cusub si ay u dhex gasho macnaha guud. Waxaan ku darnaa arrinta dhakhtarnimada cilmu -nafsiga waxaanna helnaa nooc casri ah oo Pelayo ah ...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga14 Xiga →